Mogadishu Journal » 2018 » March » 6
Mjournal :-Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan wadtashi ah oo ku saabsanaa Geedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka la yeelatay Maamulka Gobolka Banaadir. Kulanka oo ay ka soo qaybgaleen Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Ku-Xigeenadiisa iyo...
Mjournal :-Xukuumadda Austaraliya ayaa sheegtay in ay Soomaaliya siin doonto kaalmo dhinaca bani’aadanimada oo dhan 5.5 Milyan oo Doolarka Australia una dhiganta in ka badan 4 Milyan oo Doolarka Maraykanka, taasi oo loogu tala galay in wax looga qabto arrimaha Amniga deeqaha iyo...
Ethiopia, Kenya, Nigeria, Chad and Djibouti are on the itinerary of US Secretary of State Rex Tillerson’s week-long trip to the African continent starting on Monday. It is his first official visit and the first where the US is expected to come out with a clearer policy...
The Speaker of the Federal Parliament, Mohamed Osman Jawari has announced plans to rebuild Somalia’s Parliament building, a sign of recovery after decades of civil war. In a live interview with state-owned SNTV, attended by live studio participants, the Speaker answered questions...
Mjournal :-Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen lix askari oo ka tirsanaa ciidamada Jubbaland ee ku sugan Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Askartaan ayaa Shabaab waxa ay sheegeen inay iska soo dhiibeen degaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Gedo, waxaana halkaasi...
Man Utd Oo Qaaday Talaabo Paris Saint-Germain Kaga Dulqaadeyso Paul Dybala
Manchester United ayaa ku adkeysaneysa weli in ay dooneyso saxiixa xiddiga kooxda Juventus Paulo Dybala. Rai Sport ayaa sheegaya in ciyaaryahanka la rumeysan yahay inuu ku jiro liiska ciyaartoy uu doonayo tababare Jose Mourinho. Macalinka reer Portugal ayaa diyaar u ah inuu...
Mjournal :-Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in dhawaan dib u dhis lagu sameyn doono Aqalka Golaha Shacabka. Jawaari, ayaa sheegay xarunta Golaha Shacabka inay tahay madal sharafeed ay ku...
Amaro lagu soo rogay xildhibaannada Jubbaland
Mjournal :-Amaro cusub ayaa lagu soo roggay Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ka dib markii qaar ka mid ah Xildhibaanada Jubbaland kulan ay ku yeesheen Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee maamulka Jubbaland. Waxaa ka mid ah Amaradda in aysan ku shiri karin meel ka baxsan...
Ardey lagu dilay degmada Afgooye
Mjournal :-Kooxo hubeysan ayaa xalay fiidkii qof shacab ah ku dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, kooxihii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday sida ay tilmaameen dadka deegaanka. Marxuumka la dilay ayaa ahaa Arday wuxuuna ka mid ahaa dadka ku nool degmada...
Khayre oo su’aalo lagu weydiiyay shirka ka furmay Washington
Mjournal :-Waxaa Magaalada Washington ee dalka Maraykanka ka furmay shirka (Forum Fragility 2018) oo looga hadlayo Maareynta Dhibaatooyinka ka dhasha Nabadgalyo xumida iyo Xasilooni darada. Shirkan oo uu soo qaban-qaabiyey Bankiga Adduunka (World Bank) ayaa waxaa diirada lagu...